हेपाटाइटिस ‘सी’ किन हुन्छ, कसरी गर्ने उपचार? – Health Post Nepal
हेपाटाइटिस ‘सी’ किन हुन्छ, कसरी गर्ने उपचार?
२०७८ साउन १३ गते १०:५४
हेपाटाइटिस सी कलेजो (लिभर) को गम्भीर संक्रमण हो, जसको लक्षण सुरुवातमा निकै सामान्य हुन्छन् । आइतबार नेपालसहित विश्वभर विश्व हेपाटाइटिस दिवस मनाइरहँदा हामीमध्ये धेरै हेपाटाइटिस सी भाइरसको संक्रमणका कारण, लक्षण, जोखिम र यसबाट बच्ने उपायबारे अनभिज्ञ हुन सक्छौँ । तसर्थ, यसरोगबारे पर्याप्त जानकारी समेटिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नु वाञ्छनीय छ ।
हेपाटाइटिस सी एक प्रकारको कलेजोको संक्रमण (लिभर इन्फेक्सन) हो, जुन हेपाटाइटिस सी नामक भाइरसका कारणले फैलिन्छ । सुरुवाती अवस्थामा यस रोगका लक्षण ज्यादै सामान्य हुन्छन्, जसका कारण मानिस यसमा ध्यान दिँदैनन् । प्रतिवर्ष २८ जुलाईलाई विश्व हेपाटाइटिस दिवसका रूपमा मनाइन्छ, ताकि यस गम्भीर तथा घातक रोगबारे जागरुक गर्न सकियोस् ।
हेपाटाइटिस सीबारे जानकारी हुनु अत्यन्त जरुरी छ, किनकि लामो समयसम्म नजरअन्दाज गर्नाले यो रोग लिभर क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ । लिभर क्यान्सरमा ज्यादातर हेपाटाइटिस सी नै कारण बन्ने गरेको छ । संक्रमित रगतको प्रयोगले हेपाटाइटिस सी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा निकै तेज गतिले फैलन सक्छ ।
कसरी फैलिन्छ हेपाटाइटिस सी भाइरस ?
हेपाटाइटिस सीको भाइरस रगतको माध्यमले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रवेश गर्छ । सामान्य रूपमा प्रयोग गरिएको सुई (इन्जेक्सन) लाई दोहोर्याएर प्रयोग गर्नाले तथा संक्रमित व्यक्तिको रेजर प्रयोग गर्नाले यो भाइरस अर्को व्यक्तिमा फैलिन सक्छ । यसका अलावा गर्भवती महिलाका शिशुमा यो भाइरस फैलिने सम्भावना हुन्छ । पुरुषमा महिलाको तुलनामा यसका लक्षण ज्यादा देखिने गर्छ, किनकि, महिलामा एस्ट्रोजन नामक हर्मोन हुन्छ, जसले लिभरको रक्षा गर्छ ।
हेपाटाइटिस सीका लक्षण
– वाकवाकी लाग्नु,
– उल्टी हुनु,
– भोक कम लाग्नु वा खान मन नलाग्नु,
– ज्वरो आउनु,
– पेटभन्दा माथि दाहिने भागमा दुखाइ वा पीडा हुनु,
– जन्डिस हुनु वा शरीरमा पहेँलोपन देखिनु,
– पिसाबको रङ गाढा पहेँलो हुनु,
– केही रोगीमा दिसाको रङ पहेँलो हुनु,
– रोगको गम्भीर अवस्थामा एक्युट लिभर फेल हुन सक्छ ।
हेपाटाइटिस सीको खतरा बढाउने कारक
यी कारणले हेपाटाइटिस सी हुने खतरा बढ्छ :
– संक्रमित व्यक्तिलाई प्रयोग गरेको सुई (निडल) अन्य कुनै व्यक्तिमा प्रयोग गर्नु,
– संक्रमित इन्जेक्सनले ड्रग्स लिनु,
– संक्रमित व्यक्तिको रगतको सम्पर्कमा आउनु,
– संक्रमित व्यक्तिको रगत विनापरीक्षण अन्य व्यक्तिलाई चढाउनु,
– ट्याटु खोपाउनु,
– संक्रमित व्यक्तिको टुथब्रस वा रेजरको प्रयोग गर्नु,
– असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्नु ।
हेपाटाइटिस सी भाइरसबाट बच्ने उपाय
– हेपाटाइटिस सीको संक्रमण लामो समयसम्म लुकेर रहन सक्छ, अर्थात्, हेपाटाइटिस सीको संक्रमणको निकै वर्षपछि मात्र यसको उपचारको आवश्यकता पर्न सक्छ । यस अवधिमा संक्रमित व्यक्तिले यस्ता उपायको अवलम्बन गर्न सक्छन्, जसबाट लिभरलाई नोक्सानी पुग्नबाट बचाउन सकियोस् । यी उपायमध्ये मदिराजन्य पदार्थको सेवान बन्द गर्नु प्रमुख उपाय हो । हेपाटाइटिस सी संक्रमित व्यक्तिले अल्कोहलयुक्त पेयपदार्थको सेवन बिलकुलै बन्द गर्नुपर्छ, या त ज्यादै कम गर्नुपर्छ ।
– सुईको माध्यमबाट औषधि लिने जो–कोही व्यक्तिले हेपाटाइटिस सी संक्रमणको जाँच गराउनुपर्छ ।
हेपाटाइटिस सीको उपचार
– हेपाटाइटिस सीले ग्रस्त बिरामीको उपचार एन्टिभायरल औषधिको माध्यमबाट गरिन्छ । यस रोगमा ओरल एन्टिभायरल औषधि पनि दिने गरिन्छ, जसले रगतबाट हेपाटाइटिस सी भाइरसलाई हटाउँछन् ।
– औषधिको प्रयोगपछि लिभरसिरोसिस र लिभर क्यान्सर हुने जोखिम कम हुन्छ । तर, हेपाटाइटिस सीका कारण हुने लिभरको रोग गम्भीर अवस्थामा पुगेमा लिभर ट्रान्सप्लान्टबाहेक उपचारको अन्य विकल्प बाँकी रहँदैन ।